अदालतले फैसला सुनाउने तयारी गरिरहेकै बेला ‘ओलीले फेरी बोलि’ « Etajakhabar
सर्वोच्चले अब संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अब बढीमा दुई-तीन दिनभित्र सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ । सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गरिदिन्छ कि बदर भन्नेमा सर्वत्र चासो छ ।
संसद विघटनबारे फैसला आउनै लाग्दा किन भेटे सेना प्रमुखले प्रधानन्यायाधीस ?
के प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने संकेत पाए ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि सम्म विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने ठोकुवा भाषणमा गरेका थिए । संसद पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने दिवा सपना नदेख्न आफ्ना विरोधीलाई चेतावनी पनि दिन्थे । तर केही दिन यता प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ति परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ ।